Su'aalaha la Weydiiyo - Codadka Shaqaalaha Galmada VIC
You are here: Bogga ugu weyn / FAQ
Waa maxay Dib u eegidu?
Dawlada Fiktooriya ayaa weydiisatay hogaamiyaha xisbiga Party, xubin ka tirsan baarlamaanka iyo qofkii hore u dhaqdhaqaaqa galmada Fiona Patten inay hogaamiyaan dib u eegis lagu sameeyo xukunka shaqada galmo ee Victoria. Waxay tixgelin doontaa waxyaabaha soo socda:
Dhamaan noocyada shaqada galmada (sida uu qeexay sharciga), oo ay kujiraan shaqada galmada ee ganacsiga galmada iyo wakaalada wehelinta, adeegyada galmada ee lagu bixiyo qolka duugista iyo ganacsiyada la midka ah, shaqada galmada ee ay leeyihiin ganacsiyada yaryar ee ay maamulaan iyo shaqada galmada ee salka ku haysa.
Nabdoonaanta goobta shaqada oo ay ku jiraan arrimaha caafimaadka iyo amniga iyo ceebta iyo takoorka ka dhanka ah shaqaalaha galmada.
Shuruudaha sharci u dejinta hawlwadeennada ganacsiga galmada ee ganacsiga.
Awoodda sharci fulinta ayaa looga baahan yahay inay wax ka qabato falalka dambiga ah ee ka dhaca wershadaha shaqada galmada, oo ay ku jiraan qasab, dhiig-miirasho, addoonsiga deynta iyo addoonsiga.
Ammaanada deegaanka iyo goobta dhismayaasha bixiya adeegyada galmada iyo shaqada galmada ku saleysan wadada.
Dhiirrigelinta caafimaadka bulshada iyo sharciyo ku habboon oo ku saabsan xayeysiinta shaqada galmada.
Badbaadada iyo samaqabka shaqaalaha galmada, oo ay kujirto khibradda rabshadaha ee ka soo baxa shaqada galmada iyo natiijada ka dhalata.
U doodista shaqaalaha galmada badbaadada iyo samaqabka.
Waxaad ka akhriyi kartaa waxyaabo dheeraad ah halkan:
Waa maxay xukunku?
Go'aaminta shaqada galmada micnaheedu waa in meesha laga saaro shuruucda dambiyada ee ka dhan ah dhammaan dadka qaangaarka ah ee oggolaanaya iibsashada ama iibinta adeegyada galmada iyo maaraynta ganacsiyada galmada. Waxay astaan ​​u tahay sharciga u aqoonsanaya shaqada galmadu inay tahay shaqo halkii ay ahaan lahayd dambi.
Meesha laga saaro sharciga dambiyada micnaheedu maahan in galmadu shaqadeeda gabi ahaanba noqon doonto mid aan sharci ahayn. Xaqiiqdii, go'aan gaariddu waa u sameysaa shaqaalaha galmada inay ka faa'iideystaan ​​isla xeerarkaas oo ka dhiga shirkadaha kale ee adeegyada bixiya iyo ganacsiyada kale inay amaana. Waxa muhiimka ah waa in la hubiyo in xeerarka ku saabsan waxyaabaha sida qorshaynta magaalada, caafimaadka shaqada iyo badbaadada iyo shuruudaha shaqada ay ku habboon yihiin shaqaalaha galmada oo loo adeegsado si caddaalad ah.
Kala-soociddu waxay xaddidaysaa doorka booliisku in lagu xoojiyo oo keliya sharciyo ka soo horjeedda rabshadaha, xadgudubka, iyo ka-faa'iideysiga carruurta ee warshadaha galmada. Waxay yareysaa caqabadaha shaqaalaha galmada la kulmaan markay doonayaan inay booliska u soo sheegaan dembiyada ama xadgudubka qoyska. Waxay macnaheedu tahay in shaqaalaha galmada oo dhami ay sifiican awood ugu yeelan doonaan inay muquuniyaan madaniga, dhaqaalaha iyo xuquuqul insaanka maxaa yeelay waxaa ilaalin doona sharciga ka soo horjeedka takoorka iyo shuruucda kale ee quseeya kaliya kuwa ku hawlan howlaha sharciga ah.
Go'aamintu waxay yareyneysaa carqaladaha shaqaalaha galmada ee sheeganaya dheefaha samafalka ama u dhaqaaqista kaalin ka baxsan warshadaha galmada, gaar ahaan marka ay kujirto ka bixitaan (saarid) wixii dambi dambi ah ee laxiriira shaqada galmada.
Kala-soociddu, si kastaba ha noqotee, si toos ah uma baabi'ineyso dhaleeceynta iyo takoorka ama ma baabi'inayso dhibaatooyinka ay abuurayaan. Si go'aanku u noqdo mid wax ku ool ah, dowladda waa in ay hubisaa in baahida galmo ee shaqaalaha galmadu ay dhowrsan tahay. Tallaabooyin dheeri ah waa inay sidoo kale taageeraan waxbarashada, la-dagaallanka rabshadaha, u doodista iyo barnaamijyada taageerada bulshada ee ka dhiga nolosha shaqaalaha galmada nolosha mid ka sii wanaagsan oo aamin ah.
Sidee shaqaalaha galmada u sheegi karaan Dib u eegista waxay u maleynayaan?
Codkaaga iyo waayo-aragnimadaada ku saabsan warshadaha galmada waa la tirinayaa, inaad kuwan ku wadaageyso qaab soo gudbin rasmi ah ama aad ku biirto koox diyaarinaysa mid. Ha ka waaban inaad ra’yigaaga dhiibato. Waxaa jira dhowr siyaabood oo aad tan ku sameyn karto:
Ururo kaladuwan ayaa diirada saari doona meelaha ay inta badan ka hawl galaan - tusaale caafimaadka galmada, shaqada galmada ragga ama kahortaga rabshadaha. Dhammaantood way u furan yihiin inay maqlaan khibradahaaga shaqsiyeed, oo aan la qabsan karin inay iyagu kaa maqlaan mooyaane. Waxa kale oo laga yaabaa inaad rabto inaad qoraal la soo qorto asxaabtaada galmada ka shaqaysa si ay ugu fududaato. Waxaad sidoo kale toos ugu qori kartaa Dib-u-eegista ugu dambayn Luulyo 17. Cinwaanka emaylku waa swr@justice.vic.gov.au. Tan waad samayn kartaa adoo aan aqoonsanayn naftaada. Haddii aad rabto caawimaad kasta oo qoritaan ah soo gudbinta, waxbadan ayaa laga heli karaa, midkoodna Voices Victoria 'Voices Victoria, Vixen Collective, Scarlet Alliance ama Victoria Work Law Reform Victoria.
Waa maxay Codadka Shaqaalaha Galmadu inay qabtaan?
Marka la eego Cudurka faafa ee COVID-19 waxaan abuureynaa habab fara badan oo khadka tooska ah iyo aalado loogu talagalay shaqaalaha galmada inay gacan ka geystaan ​​Dib u eegista. Kaqeybgalka geedi socodka dib u habeynta sharciga waa mid cakiran oo cabsi gelin kara, sidaa darteed waxaan isku daynay inaan ku carqaladeeyno macluumaadka aasaasiga ah iyo talaabooyinka sharciga ah ee luqadda ay heli karaan dhammaan shaqaalaha galmada oo ay ku jiraan kuwa aan u isticmaalin Ingiriisiga sidii luuqadooda ay doorbidaan. Kuwani waa waxyaabaha aan sameyneyno. Aad ayaa lagugu soo dhaweynayaa inaad ku soo biirto midkoodna adoo adeegsanaya xiriiriyeyaasha websaydhkayaga.
Faahfaahin kooban oo ku saabsan sharciga Fiktooriya iyo qaar ka mid ah qaababka shaqaalaha galmada iyo baarayaashu ay yiraahdeen waa inay ku baddelato go'aan qaadasho.
Fiidiyowga Fiona Patten oo la hadlaya shaqaalaha galmada.
A 13 daqiiqo fiidiyow oo ah gudoomiyaha dib-u-eegista, Fiona Patten oo la hadasha shaqaalaha galmada ee ku saabsan Dib-u-eegista iyo sida ay shaqaalaha galmada wax ku biirin karaan.
Waxaad faallooyinka ka bixin kartaa oo aad weydiin kartaa su'aalaha hoosta fiidiyowga ay Fiona kaga jawaabi doonto kulankeena bulshada ee internetka.
Shirka bulshada ee khadka tooska ah.
Sidoo kale loo yaqaan 'webinar', kani wuxuu noqon doonaa kulan loogu talagalay shaqaalaha galmada si ay u maqlaan jawaabaha Fiona ee ku saabsan su'aalaha shaqaalaha galmada iyo inay ka wada hadlaan go'aan qaadista.
Aqoon-isweydaarsiga khadka tooska ah
Kulamo yar oo khadka tooska ah ayaa lagu dhexqarandoonaa kooxo gaar ah oo ka shaqeeya arrimaha galmada iyo arrimo gaar ah. Illaa iyo hadda waxaan haysanaa mid qorsheysan oo loogu talagalay ragga ragga ah iyo mid loogu talagalay kuwa ku hadla af Shiinaha. Nala soo socodsii hadaad hayso mawduuc aqoon isweydaarsi khadka internetka ah ah.
An sahanka khadka tooska ah ee qarsoon waxay bixisaa hab deg deg ah oo fudud oo aragtiyahaaga looga gudbiyo. Waxaa loo tarjumi karaa dhowr luqadood. Macluumaadka la ururiyo waxaa ku soo ururin doona Xarunta Kirby si loogu sameeyo warbixintii ugu dambeysay ee Dib-u-eegista.
Fiiri goobtan loogu talagalay ogeysiiska taariikhaha, waqtiyada iyo mowduucyada?
Kawaran hadaad rabto oo kaliya inaad kahadasho hal ama labo arimood oo aysan badana aheyn?
Taasi waa hagaagsan tahay. Haddii aad leedahay aragti ku saleysan khibradaada ku saabsan, dheh, shaqo galmo ku saleysan wadada, ama in khamri loo oggol yahay dhillooyinka, ama waxa laga qaban karo si looga hortago rabshadaha ka dhanka ah shaqaalaha bullaacadda, waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad ka hadasho.
Kawaran hadaad rabto inaad ku hadasho luuqad kale?
Faallooyinka ay ku hadlaan shaqaalaha galmada ee luqada la doorbiday aad ayey muhiim ugu yihiin Dib-u-eegista maxaa yeelay sharciga xun ayaa si gaar ah u saameeya shaqaalaha galmada soogalootiga. Waxyaabaha mashruuca galmada shaqaaluhu ee loo yaqaan 'Victoria Workers' Voices Victoria waxay ku yaalaan meel turjuman. Hay'adaha kale ee horumarinaya soo gudbinta ayaa sidoo kale laga yaabaa inay diyaariyaan turjubaan.
Ma u qalantaa dadaal?
Shaqaalaha galmada waxay ogyihiin in ay aad u adagtahay in dowladaha laga yeelo waxa saxda ah. Taariikhda Fiktooriya gudaheeda waxaa ka jira taariikh ku saabsan shaqaalaha galmada oo hadlaya oo aan dhagaysan. Tani waxay dhacday markii shaqada galmada la sharciyeeyey 1980-yadii. Si kastaba ha noqotee, sababahan soo socda bay'ada Fiktooriya waxay si gaar ah hadda ugu habboon tahay qaansheegad si buuxda u baabi'ineysa shaqada galmada:
Kala-soociddu waxay ku jirtaa nidaamka Xisbiga Shaqaalaha.
Shuruudaha tixraaca Dib-u-eegistu waxay ku saabsan tahay sida loo kala xukumo shaqada galmada, ma aha inay tahay in la go'aamiyo.
Dib-u-eegida waxaa hogaaminaya shaqaale hore oo galmo oo leh rikoor xoogan oo rikoor ah oo ku saabsan dib-u-habeynta sharciga bulshada ee horumarka
Go'aan ka gaarista ayaa ka dhacday Gobollada Waqooyiga, New South Wales, iyo New Zealand.
Cabsida ku saabsan AIDS, addoonsiga galmada iyo cudurka faafa ee heroin-ka ee saameyn ku yeeshay siyaasada 1990-meeyadii ayaa hoos u dhacay.
Talooyinka Dib-u-eegistu waxay aadi doontaa dowlad shaqaale oo boos xoog leh ku leh baarlamaanka. Taas macnaheedu waa in aysan aad ugu nugulhayn falcelinta diidmo ee kuwa ka soo horjeeda xuquuq siman ee shaqaalaha galmada.
Goormay waxaasi oo dhami dhacaan?
Hada wararka xun… Xilliga kama dambeysta ee qoraalka gudbinta waa 17-ka Juulaay. Waqtiga la tashiga aad ayuu u gaaban yahay. Si kastaba ha noqotee, waxaa jiraya nidaam wada tashi dheer oo lala yeesho shaqaalaha galmada inta lagu gudajiro nidaamka dib u habeynta sharciga.
Maxay tahay sababta aan ugu baahan nahay wadahadal ku saabsan go'aan qaadasho? Maxaan u raaci weyday tusaalaha NSW ama New Zealand?
Go'aaminta macnaheedu waa in meesha laga saaro sharciga dembiyada ee ka dhanka ah shaqada galmada ee qaangaarka iyo maareynta warshadaha galmada iyada oo loo marayo qawaaniinta caadiga ah ee daboolaya dhammaan ganacsiyada sharciga ah iyo bixiyayaasha adeegga. Hase yeeshe qawaaniintaasi waa isku-dhafnaan adag oo xeerar ah in la raaco loona oggolaado in la helo. Badanaa waxaa loo yaqaan 'cajalad cas', qawaaniinta ganacsigu waxay daboolaan caafimaadka iyo badbaadada shaqada, xaaladaha shaqada, nidaamyada maaliyadeed, dhismaha, xayeysiinta, qorshaynta iyo waxyaabo badan oo aad u badan. Marka ay dowladu meesha ka saarto sharciga dambiyada ee ku saabsan shaqada galmada waa iney go aansato sida xeerarka u quseyn lahaayeen warshadaha galmada. Si otomaatig ah uma dhacdo.
Nasiib darrose, dib-u-habeynta sharciga lama wareejin karo. Sababtoo ah qawaaniinta ganacsigu way ku kala duwan yihiin dowlad-goboleed, iyo xaqiiqda inta u dhaxaysa waddammada, xukun kasta wuxuu leeyahay inuu iskaa wax u qabsado sida saxda ah ee ay ugu habboon tahay warshadaha galmada inay si buuxda u go'aansato qaab dhismeedka qaaska ah ee sharciga.
Waa maxay farqiga u dhexeeya shaqada sharci ahaanta iyo sharci darrada galmo ee Fiktooriya maxaana taas macno ii leh?
Sharci ahaan baahinta ayaa sharxeysa waxaan hadda ku leennahay Fiktooriya. Qaar ka mid ah shaqada galmada waa sharci qaarna ma aha. Shuruucda dambiyada ee ka dhanka ah shaqada galmada ayaa la adeegsadaa marka laga reebo nooc cayiman oo ganacsiyada galmada la ogol yahay. Sharci dejinta ayaa had iyo jeer macnaheedu yahay warshadeynta galmada laba heer - waax sharciyeed aad loo habeeyay iyo waax sharci darro ah oo aan sharci aheyn.
Go'aamintu waa in meesha laga saaro dhammaan sharciga dambiyada iyo in lagu habeeyo warshadaha galmada iyada oo la raacayo qawaaniin isku mid ah oo khuseeya ganacsiyada iyo bixiyeyaasha adeegga.
Farqiga u dhexeeya nolosha shaqaalaha galmada waa mid aad u weyn. Iyada oo shaqaalaha galmada ay go'aan ka gaarayaan mar dambe ma ay go'aansan doonaan waaxda ay ka shaqeyn doonaan. Hawl wadeennada Brothel mar dambe ma helayaan faa iidada ay ku bixiyaan shaqada sharciga ee shuruudahooda. Shaqaalaha gaarka loo leeyahay ma sii ahaan doonaan inay isdiiwaangeliyaan ama ka baqayaan in la ciqaabo. Shaqaalaha ku saleysan wadooyinka ayaa lahaan doona hal lakab oo ka yar ilaalinta boliiska
Waxaan rabaa inaan si gaar ah u shaqeeyo anigoon magacayga u bixin wax diiwaan gelin ah. Waxaan ka walwalayaa inaysan suuro gal noqon doonin.
Waa walwal sax ah. Shaqaalaha galmada waxay markii ugu horeysay bilaabeen inay ka hadlaan ku saabsan 'xeerarka ganacsiga caadiga ah' ee shaqada galmada oo badal u ah sharciga dambiyada 1970-yadii. Xilliyadii dambe waxaa jiray xeerar ganacsi oo aad u yar iyo qaababka xog aruurinta ayaa si xun uga cabirnaa heerarka maanta. Hadda dhaqdhaqaaq kasta oo ganacsi oo sharci ah ayaa la nidaamiyaa oo xeerarka ayaa si joogto ah ugu baahan ganacsadaha ama ganacsigu inuu bixiyo magacyadooda. Dawladdu waxay dadka ka filaysaa inay aaminaan shuruucda ilaalinta xogta inay joojiso macluumaadkooda ama si khaldan loo isticmaalo.
Hal dariiqo oo ay galmadu kaga hadli karaan tan ayagoo ku doodaya in, aqoonsiga shaqaalaha galmada gaar ahaan baahiyaha amniga iyo asturnaanta, dhillayaasha yaryar iyo kuwa kaligood ganacsadayaasha ah waa in laga dhaafa dhammaan sharciyada. Hab kale ayaa ah in la helo xeerar khatar ugu yar ku ah arrimaha gaarka ah. Tusaale ahaan xeerarka ugu yar ayaa lagu dabaqayaa timajarayaasha ama farshaxanada qurxinta ka shaqeeya guriga ama wareega. Kaliya waa inay u sheegaan golaha deegaanka inay shaqeynayaan halkii ay ka codsan lahaayeen ogolaansho ay ku shaqeeyaan. Dariiqo kale ayaa ah in lagu doodo in xeerar kasta oo lagu dabaqo kuwa galmoodka gaarka loo leeyahay ay tahay inay aqoonsadaan 'shakhsiyaadka dabiiciga ah', kuwaas oo ah jidh dad leh magacyo, iyo dad aan dabiici ahayn oo ah ururro sida shirkadaha oo kale ah. Habkaas, shaqaalaha galmada waxay ku ilaalin karaan asturnaantooda iyagoo sameysanaya shirkad ama urur kale.
Muhiimadda ugu weyn ee loo baahan yahay in loo sameeyo Dib-u-eegista - iyo in ka badan inta shaqaalaha galmada ee ugu badan ee suuragalka ah - ayaa ah shaqaalaha galmada uma hoggaansami doonaan nidaam kasta oo sharci oo ku lug leh magacaabida naftooda iyo shaqadooda diiwaangelinta gaarka ah ee shaqaalaha galmada ama diiwaanada kale ee ganacsiyada. Haddii dowladdu ay ilowdo tan, dib u habeynta sharciga shaqada galmadu way fashilmi doontaa maxaa yeelay qaybta aan sharciyeysnayn waxay sii wadi doontaa inay soo jiidato shaqaalaha galmada.